Miatrika fiantsoan’ny polisy ny mpanomana fihetsiketsehana pro-demaokrasia ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Nanomana famoriam-bahoaka hatramin'ny taona 2003 ny Mandatehezan'ny Zon'Olombelona Sivika
Voadika ny 04 Mey 2021 4:28 GMT
Fihetsiketsehana tao Hong Kong nopihana tamin'ny 16 jona 2019. Saripika: May James/HKFP.
Ny lahatsoratra manaraka etoana dia nosoratan'i Kelly Ho ary navoakan'i Hong Kong Free Press tamin'ny 27 Avrily 2021. Ny endrika etoana dia navoaka tato amin'i Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Miatrika fiantsoan'ny polisin'ny tanàna ny vondrona mpiara-dia amin'ny zo sivily ao Hong Kong izay nanomana ireny fihetsiketsehana lehibe tamin'ny taona 2019 ireny satria nolazaina ny vondrona fa nanitsakitsaka ny Lalam-pikambanana, lalàna iray ao an-toerana mifandraika amin'ny fisoratan'ny fikambanana anarana.
Ny mpanao famotorana avy amin'ny fahefana dia nangataka ny hanoloran'ny Mandatehezana mpiaro ny zon'olombelona sivily (CHRF) ao anaty singa [dosie] enina ny asa ataony, hoy ny mpiantso ao aminy Figo Chan, izay nahazo taratasy miaty fangatahana, rehefa namaly ny fiantsoana avy tany amin'ny polisy izy ny alatsinainy teo, mifandraika amin'ny vesatra mifandraika fihetsiketseham-panoherana izay nahazoany fahafahana vonjimaika ankehitriny [taorian'ny nandoavany solofamonjana].
Araka ny taratasy iray tamin'ny 21 aprily 2021, nilaza ny polisy fa nisoratra anarana ho fikambanana fiarahamonina ny CHRF ambany fifehezan'ny Lalam-pikambanana tamin'ny volana jolay 2006 fa nofoanana ny fisoratany anarana tokony roa volana taty aoriana. Nilaza ny fahefana fa mifototra amin'ny torohay nangonina avy amin'ny sehatra haino aman-jery sy haino aman-jery sosialy, dia mbola nanohy niasa ho toy ny fikambanana fiarahamonina ny CHRF taorian'izay, izay lazaina fa nandika ny fizarana faha-5 amin'ny lalàna.
Nangataka tamin'ny CHRF ny polisy mba hanazava ny antony tsy nangatahany indray hisoratra anarana ary natsangana sy tantanan'ilay vondrona ve ny pejy Facebook “Front Human Rights Human Front”. Nangataka tamin'ny vondrona ihany koa ny [fahefana] mba hanome ny lisitry ny fihetsiketsehana ampahibemaso rehetra nataony hatramin'ny septambra 2006 sy ny torohay momba ny loharanom-bolany sy ny fandaniany, ary koa ny kaonty banky nampiasain'ny fikambanana handraisana famatsiam-bola.
Nikarakara diabem-bahoaka marobe nahazo fankatoavan'ny polisy ny CHRF nandritra ny hetsika fanoherana ny volavolan-dalàna fampodiana tamin'ny taona 2019, anisan'izany ny diabe “roa tapitrisa” manan-tantara tamin'ny 16 jona tamin'io taona io. Saingy nanam-pahasarotana ny vondrona haazo alalana taty aoriana satria nanjary fifandonana mahery vaika teo amin'ny polisy sy ny mpanohitra pro-demokrasia ny volana maro nisian'ny hotakotaka.
Ny fihetsiketsehana farany nankatoavin'ny polisy nokarakarain'ny CHRF dia ny diaben'ny Taom-baovao 2020, izay tombanan'ny vondrona ho nahazo olona 1,03 tapitrisa.
Tao amin'ny taratasy voarain'i Chan, notononin'ny polisy ny fanangonan-tsonia ho an'ny iraka manokan'ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona niara-nosoniavin'ny CHRF sy vondrona mpiaro ny zon'olombelona 25 hafa tamin'ny volana desambra lasa teo. Nanontanian'ny polisy ny fikasan'ny vondrona nanao sonia ilay fanangonan-tsonia, izay natao hanoherana araka ny fahitan'ny mpanao sonia ny fampiasan-kery tafahoatra nihatra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo olona nampidirina am-ponja vonjimaika.
Nomena baiko ny CHRF hamaly ny fangatahan'ny polisy amin'ny 5 Mey na alohan'ny 5 Mey. Nilaza tamin'ny mpanao gazety i Chan fa hangataka torohevitra ara-dalàna [ara-pitsarana] izy ireo ary tsy hanana fanehoan-kevitra intsony.
Ao amin'ny Twitter, maro ny mahita ny filazan'ny polisy ho marika famoretana hafa bebe kokoa amin'ny vondrona sivika. Nasongadin'ny @webbhk ny fahadalàn'ny fitakian'ny polisy:
Izany hoe tokony ho 14 taona eo ho eo amin'ny famoahana taratasy tsy misy fanakianana an'i CHRF_HK sy tamin'ny fifehezana ireo diabe 1 jolay sns, ny polisy, izay mikarakara ihany koa ny Rejisitry ny Fikambanana (fiarahamonina), no miahiahy fa fikambanana tsy nisoratra anarana (tsy ara-dalàna) izy ity nandritra izany fotoana lava izany.
Nahatsinjo mialoha ny vondrona mpikatroka Hong Kong ampitan-dranomasina @HKGlobalConnect fa mety hampiasa ny lalànan'ny fiarovam-pirenena ny polisy hamoritra ny mpiara-dia sivika:
Ny fangatahana antsipirian'ny famatsiam-bolan'ny @chrf_hk sy fanazavana momba ny fanangonan-tsonia nataony ho an'ny Firenena Mikambana dia mety hanondro fa mitady handrara ny asan'ny CHRF noho ny antony fiarovam-pirenena (fomba nandrarana ny antoko nasionaly HK tamin'ny taona 2018), na noho ny ifandraisan'ny CHRF amin'ny fikambanana politika vahiny.
Zo ‘tsy lavorary’
Ny talata 27 aprily, nandà ny hanome ny heviny momba ny fangatahan'ny polisy amin'ny rakitry ny CHRF ny Lehiben'ny Mpanatanteraka Carrie Lam. Lahatsoratra bilaogy navoakan'ny minisitry ny fitsarana ny alatsinainy 26 avrily no notsongain'i Lam, izay nilaza fa iantohan'ny lalàna tsotra indrindra ny fahalalahana maneho hevitra, mivory am-pilaminana, manao filaharana an-dalambe ary manao fihetsiketsehana.
Saingy “tsy lavorary” ary “iharan'ny fameperana” ireo zon'olombelona ireo, hoy i Lam, ary napetraka izany famerana izany hiarovana ny zon'ny hafa sy hiarovana ny filaminam-bahoaka sy ny fitoniana ao an-tanàna.
“Matoky aho fa nanao hetsika mifanaraka amin'ny lalàna ny polisy. Fa araka ny nolazaiko, tsy hanome hevitra amin'ny raharahan'ny sampan-draharaha mpampihatra lalàna tsirairay aho,” hoy izy.
Tamin'ny volana lasa teo, voatsipatsipaky ny Pro-Beijing sy ny gazety mpanohana fitondrana ny CHRF, izay voatsikera tamin'ny nandraisany anjara tamin'ny fanomanana ny fihetsiketseham-panoherana an-dalambe, satria voalaza ny “nanokafany ny lalana ho an'ireo mpirotaka miakanjo mainty sy mpisintaka hanangana famoriam-bahoaka sy fihetsiketsehana.” Nambaran'izy ireo ihany koa—tsy misy porofo—fa nandray famatsiam-bola vahiny ny CHRF, fiampangana izay tsipahin'ny fikambanana.
Taorian'ny tatitra, fara-fahakeliny vondrona pro-demaokrasia enina no nanambara ny fikasany hiala amin'ny fiarahan-dia, ao anatin'izany ny Antoko Demaokratika, Antoko Sivika, Sendikan'ny Mpampianatra Hong Kong, Fikambanana Hong Kong ho amin'ny Demaokrasia sy ny Fiainam-Bahoaka, ary ny Foiben'ny Servisin'ny Mpiasa sy ny Manodidina.